Lord El-Melloi II Case Files: Rail Zeppelin Grace Note | Peace site
Anime Series, Fate Universe
November 13, 2020 peacesite7410	Leaveacomment
Synopsis of Lord El-Melloi II Case Files: Rail Zeppelin Grace Note
Waver Velvet – The boy who fought side by side with the King of Conquerors, Iskandar, during the Fourth Holy Grail War in Fate/Zero. Time has passed, and the mature Waver has now adopted the name of Lord El-Melloi II. As Lord El-Melloi II, he takes on numerous magical and mystical cases in the Clock Tower, the mages’ mecca…
မြန်မာ နာမည် (စုံထောက်မှော်ဆရာ)
ဒီseriesကတော့ novel seriesဖြစ်ပြီး animeအနေနဲ့ season 1ခုထွက်ထားပါတယ်။
Fuyuki Holy Grail war မှာ Rider(Iskander)ရဲ့ masterဖြစ်တဲ့ Waver Velvetကိုအခြေခံထားပြီး စုံထောက်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Fourth warအပြီးမှာ waverတယောက် clock tower ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ် Lancerရဲ့master Lord Kayneth El-Melloi Archibaldသေရတာဟာ သူ့ပယောပမကင်းဘူးလို့ တွေးတဲ့waverဟာ ဆရာတယောက်အနေနဲ့ El-Melloi classမှာစာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်မှာတော့ Kayneth El-Melloi Archibaldရဲ့ ညီမဖြစ်သူ Reines El-Melloi Archisorteရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲမှုကိုခံရပြီး waverကိုကမ်းလှမ်းမှုတခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Reinesတယောက် El-Melloi အိမ်တော်ရဲ့ အကြီးအကဲနေရာကိုမရသေးခင်အထိ Lordတယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။(Lordဆိုတာကတော့ Clock towerကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေပါ)
ဒီလိုနဲ့ waverတယောက် Lord El-Melloi iiဆိုပြီး ဖြစ်လာကာ သူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ Gray,Flat Escardo,Svin Glascheit တို့နဲ့အတူတူထူးဆန်းတဲ့ အမှုတွေကိုလိုက်ရှင်းရပါတော့တယ်။
(Grayကတော့ King Arthurရဲ့ cloneပဲဖြစ်ပါတယ်)
Graden of sinnerထဲကအကြောင်းရာတစ်ချို့လဲပြန်လည်ပါဝင်ပါတယ်။ နောက် Fate/Apocrypha ထဲက Charactersတွေပါပေမဲ့ ဒီကားရဲ့ Earth က Apocryphaဖြစ်တဲ့ Earth ကမှမဟုတ်ပါဘူး။
Review From Otaku Heven-Myanmar
Previous PostDorami & Doraemons: Robot Gakkou NanafushigiNext PostKIll Me Baby